Kaydka khaliijka ayaa kor u kacay heshiiska saliida, Masar waxa qaadacay heshiiska IMF – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kaydka khaliijka ayaa kor u kacay heshiiska saliida, Masar waxa qaadacay heshiiska...
Kaydka khaliijka ayaa kor u kacay heshiiska saliida, Masar waxa qaadacay heshiiska IMF
Inta badan heshiiskii khaliijka ayaa dhamaatay Axadii, maalin kadib markii OPEC + koox soosaarayaasha saliida ay ogolaadeen in la dheereeyo rikoodhka wax-soo-saarka illaa iyo dhamaadka bisha Luulyo, iyadoo saamiyada Masar ay sare uqaadeen heshiis horudhac ah oo amaah loogu diyaarinayo IMF.
Heshiiska Sabtiga ee u dhexeeya OPEC iyo soosaarayaasha kale ee uu hogaaminayo Russia ayaa kordhiyey heshiis gacan ka geysanayay in qiimahoodu laban laabmo labadii bilood ee la soo dhaafay isaga oo meesha ka saaray ku dhawaad ​​10% sahaydii caalamiga ahayd ee suuqa.
Tilmaanta saamiga ugu weyn ee Dubai waxay ku booday 4.6%, faa’iidadeeda ugu weyn ee ilaa iyo 7dii Abriil, oo ay hoggaaminayaan 9.5% qibrad u leh Bangiga Islaamiga ah ee Dubai iyo koror 6.1% ah oo ku saabsan Hidaha Emaar.
Sacuudiga gudahiisa, hogaamiyaha OPEC hogaamiyahiisa, tirakoobka ayaa kor u kacay 0.8%, iyadoo Al Rajhi Bank uu kor u kacay 1% iyo kooxda batroolka kiimikada ee Saudi Arabia kor u kacday 1.1%.
Dhanka saliida weyn ee Saudi Aramco, waxay heshay 0.6%.
Ma cada in Sucuudiga, Imaraadka Carabta iyo Kuweyt ay kordhin doonaan goos gooskooda saliida ee mutadawiciinta ah ee ah 1.18 milyan bpd, kuwaas oo aan qayb ka ahayn heshiiska OPEC +.
Tixraaca Abu Dhabi wuxuu helay 2.4%, oo lagu xoojiyay 4.2% bood boodqaadihii ugu weynaa ee Bangiga Abu Dhabi Bangiga.
Khaliijka dibadiisa, tirakoobka buluuga ah ee Masar ku yaal ayaa kor u kacay 4.6% ka dib markii Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF) ay Jimcihii ku dhawaaqday inay heshiis heer caalami ah la gaartay Masar hal sano oo $ 5.2 bilyan oo amaah ah si loogu caawiyo waddanka inuu la tartamo cudurka faafa ee coronavirus.
Heshiiska waxaa dhameystiri doona guddiga fulinta ee IMF.
SAUDI ARABIA waxay kacday 0.8% ilaa 7,268 dhibcood
ABU DHABI wuxuu helay 2.4% ilaa 4,405 dhibcood
DUBAI waxay ka booday 4.6% ilaa 2,133 dhibcood
QATAR ayaa ku dartay 1.1% 9,349 dhibcood
EGYPT ilaa 4.6% ilaa 11,109 dhibcood
BAHRAIN wuxuu lumiyay 0.4% ilaa 1,270 dhibcood
OMAN wuxuu kacay 0.6% ilaa 3,538 dhibcood
KUWAIT ayaa kacday 0.9% ilaa 5,507 dhibcood